Maxaa ka ogtahay Ujeedka Safarka Sheekh Shariif uu ku tagay Jabuuti? | HalQaran.com
Dhamaadkii November 2019 waxaa Jibuuti booqasho ku tagay madaxwaynihii hore ee Somalia Shiikh Shariif, halkaas oo uu kula kulmay madaxwaynaha Jibuuti, Ismaciil Cumar Geelle.
Inkastoo warbaahinta loo sheegay in laga wada hadlay sidii Jibuuti ay u sii wadi lahayd tageerada ciidan iyo midda siyaasadeed ee ay siiso Somaliya , haddana ujeedada dhabta ah ee safarku waxay ahayd mid aan la shaacin laakiin warar laga helayo ilo xog ogaal ah ay sheegayaan in Shiikh Shariif uu u aaday Jibuuti si uu ula kulmo nin ka mid ah ragga ugu taajirsan Somalia kaas oo fadhi ku leh dalka Jibuuti. Taajirkan wuxuu leeyahay qaar ka mid ah shirkadaha ugu waa-wayn Soomaaliya.
Safarkan waxaa Shiikh Shariif ku weheliyay agaasime-ku-xigeenkii hore ee madaxtooyada, Cabdirasaaq Axmed Shoole, kaas oo xog-ogaal u ah qaab hoosaadka iyo strategy-yadda Farmaajo ku shaqeeyo iyo qorshayaashiisa ku aaddan doorashada 2021-ka.
Waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo kulankooda looga hadlay waxaa ka mid ahaa:
In la mideeyo ururrada mucaaradka ah meelna looga so wada jeesto dawladda talada haysa.
In dawladda talada haysa lagu furo propogand lagu jaah wareerinayo si sandka u dhiman looga mashquuliyo inay samayso wax horumar ah oo waxtari kara doorashada 2021-ka, isla markaasna lagu mashquuliyo is difaac halkii ay ka samayn lahayd horumar iyo waxqabad dhab ah.
In la kaashado dawladaha Imaaratka iyo Kenya si loo kordhiyo cadaadiska siyaasadeed, kan dhaqaale, iyo kan nabadgalyo ee lagu hayo dawladda Somalia.
In laga qayb galo shirka Imaaratku soo qaban-qaabinayo oo la rabo inuu ka dhaco Nairobi bilowga bisha December 2019, shirkaas oo ay ka soo qayb galayaan dhamaan mucaaradka Somalida iyo qaar ka mid ah beesha caalamka (gaar ahaan dawladda Ingriiska) oo aan rabin in Somalia ka dhisanto dawlad midaysa dalka oo leh awood dhaqaale, mid ciidan, iyo mid siyaasadeed.
In mucaaradku iskaashi siyaasadeed la sameeyan ururka ONLF oo taageersan Jubaland iyo doorashadii Jubaland ee Axmed Madobe.
In Shariifka la siiyo wax kasta oo dhaqaale ah oo uu u baahdo si ay ugu suurowdo inuu meel mariyo wixii la isku afgartay shirkaan isla markaana curyaamin kara dawladda hadda talada haysa.
In mucaaradka Soomaalidu ay baraha bulshada iyo idaacadaha ka hadlaan iyagoo qiil u raadinaya taageerada maamulka Jubaland iyo kan Somaliland.
In haddii mucaaradku ku guulaysto doorashada 2021-ka loo oggolaado Somaliland inay ka go’do Somalia, kadibna loo wada hadlo sidii laba dal oo kala madaxbanaan, hadday rabaana isugu imaan kara nidaam ah confederation.
In nidaamka Federalku uu ku ekaado gobolladii koofurta Somalia ee Talyanigu gumaysan jiray.
In gobolka Benadir loo sameeyo maamul goboleed si loo helo taageerayaal la isku hallayn karo oo ay isku beel yihiin Shariifka iyo maalqabeenka shirka martida loogu ahaa.
In madaxda Puntland iyo Jubaland laga dhaadhiciyo inay mucaaradka la shaqeeyan.
In haddii mucaaraku ku guulaysto doorashada 2021-ka dib u fiirin lagu sameeyo xiriirka Somalia la leedahay Turkey, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Ethiopia, Kenya, Eritrea, Jibouti, iwm.
In lagu dadaalo sidii loo kala reebi lahaa khilaafna loo dhex dhigi lahaa Farmaajo iyo Khayre.
Ma Run Baa In Jabhad Ka dagaallanta Itoobiya lagu tababarayo Kismayo?
Waxaa kaloo iyana jirta wadahadallo Jubaland iyo ONLF uga socda Nairobi oo la isku afgartay in Kismayo lagu taba baro ciidan jabhad ka hawl gasha gobolka Somalida ee Itoobiya ka tirsan.
Waddanku Hagaagi Mayo Haddii Aan Dib Loogu Soo Noqon
Waxaa wax lala yaaba ah iswaydiina leh Somalidu inay shisheeye u adeegan isuna adeegsato mooyee miyaysan iyagu danahooda iyo mustaqbalka carruurtooda iyo kan waddankooda sidii ay u hagaajin lahaayeen fahmi karin.
Haddii aan Soomaalidu waddanka ku soo noqon, lacagtii la galiyay Kenya, UAE, Turkey, Ethiopia, Uganda, South Africa, iwm aan waddanka lagu soo celin Soomaaliya inay degto waqti dheer bay qaadan.
Maxaa ka ogtahay Ujeedka Safarka Sheekh Shariif uu ku tagay dalka Jabuuti?